Ị nọ ebe a: Home / Archives maka Ngwọta Ụlọ
20 / 06 / 2015 By Roger Pilon 101 Comments
United States - Nnukwu ụlọ ebe a, obere ụlọ n'ebe ahụ! Ọtụtụ akụkọ gburugburu ụwa banyere obere ụlọ. Enwere m ike ịkwụsị uche m ịjụ ajụjụ a: ọ bụ naanị ihe "na-ewu ewu" ma ọ bụ na ọ bụghị naanị ihe na-eme? Nke a ga-enye gị nọmba siri ike iji nye aka ikpebi onwe gị ma ọ bụrụ na obere ụlọ dị ebe a iji nọrọ ma ọ bụ!
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Nlekọta Ụlọ Tagged With: obere ụlọ, United States